Apple က အောက်တိုဘာလ (၂၂) ရက်နေ့ Event မှာဘာတွေပြသမှာလဲ? ~ The ICT.com.mm Blog
Apple က အောက်တိုဘာလ (၂၂) ရက်နေ့ Event မှာဘာတွေပြသမှာလဲ?
အောက်တိုဘာလ (၂၂) ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မယ့် Apple ရဲ့ Event အတွက်ဖိတ်စာမှာ ပြသစရာတွေအများကြီးရှိတယ် လို့ရေးထားပါတယ်။ ဒါဟာကြွားဝါပြီးရေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ စက်တင်ဘာလ Event မှာတုန်းက iPhones အသစ်နှစ်ခုနဲ့ iMacs တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိပြီးပါပြီ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ Apple ရဲ့ Products အသစ်တွေကိုပြသတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့် အင်္ဂါနေ့မှာ Tim Cook စင်မြင့်ပေါ်ယူလာမယ့် အရာတွေကိုပဲဖော်ပြဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်။
ပထမဆုံးပြသမယ့် ပစ္စည်းတွေကတော့ Apple ရဲ့ Tablets အသစ်တွေဖြစ်တဲ့ iPad နဲ့ iPad Mini ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ အဲဒီ iPad နှစ်ခုဟာ တစ်ခုရဲ့ Features တွေကိုနောက်တစ်ခုမှာမှီငြမ်းထည့်သွင်းမယ့်ပုံပေါ်ပါတယ်။
iPad အကြီးမှာ iPad Mini ရဲ့ ဒီဇိုင်းကိုယူသုံးမယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ သေးသွယ်တဲ့ Display , Stereo Speaker နဲ့ ပါးလျတဲ့ ဒီဇိုင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီက လျှို့၀ှက်ထွက်ပေါ်တဲ့ပုံတွေအရ ငွေရောင် Tablet တွေကိုတွေ့မြင် ခဲ့ကြရပါတယ်။ အခုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းက ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကတည်းကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ iPad2နဲ့ဆိုရင် အမြင်ပိုင်းနဲ့အရွယ်အစားက လုံး၀ပြောင်းလဲလာတာပါ။
Tablets တွေရဲ့ အတွင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်ပဲကြားသိရသေးပါတယ်။ ပထမကြားတဲ့သတင်းတွေအရတော့ 64-bit CPU နှစ်ခုပါရှိတဲ့ A7X Chip တပ်ဆင်ထားပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်လာတဲ့ GPU နဲ့ အရွယ်ကြီးမားတဲ့ Memory ပါရှိလာပါမယ်။Apple က သူ့ရဲ့ iOS Devices တွေကိုအနည်းဆုံး RAM ပမာဏ 1GB နဲ့ရောင်းချနေတာတစ်နှစ်ကျော်ရှိပါပြီ။အဲဒီအတွက် iPad အသစ်တွေမှာအနည်းဆုံးတော့ Memory ပမာဏ 1 GB ပါရှိပါမယ်။တကယ်တမ်းတော့2GB လည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။(Third Generation iPad တွေကို iPhone မတိုင်မီမှာ 1 GB ထည့်သွင်းအသုံးပြုခဲ့တာကိုသတိရပါ။) ဈေးနှုန်းနဲ့ Internal Storage တွေကတော့အတူတူပဲဖြစ်မယ်လို့ယူဆရပြီးလက်ရှိ iPad တွေက 16GB, 32GB, 64GB, or 128GB တွေဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံး $499 နဲ့ရောင်းချထားတာပါ။
iPad Mini မှာတော့ အရင် ဗားရှင်းတွေကလို 2048×1536 Retina Display ပါရှိပါမယ်။ ကောလဟာလတွေကတော့ မျိုးစုံထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ တစ်ချို့က Retina Mini ပါရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ နောက်ဗားရှင်းတွေမှာပါလာမယ်လို့ပြောပါတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း ဗားရှင်းအသစ်တွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှ နဂိုဗားရှင်းတွေကို Entry-Level Model တွေအနေနဲ့ဆက်လက်ထုတ်လုပ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ တကယ်လို့သာ Apple က Retina မပါတဲ့ ဗားရှင်းနဲ့ ပါတဲ့ iPad Mini တွေနဲ့အတူထုတ်လုပ်ရောင်းချမယ်ဆိုရင် Apple ရဲ့ ဗျူဟာအရ Retina မပါတဲ့ Tablet တွေထက်စာရင် Retina ပါတဲ့ဗားရှင်းတွေကိုရောင်းချမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ နှစ်မျိုးစလုံးကိုတစ်ပြိုင်နက်ရောင်းချမယ်ဆိုရင်တော့ Apple နဲ့ သူ့ Software Developer တွေကိုအခက်တွေ့စေမှာပါ။လက်ရှိ iPad Mini က iOS7ရဲ့ Features တွေကိုလည်း Support ပေးပါတယ်။( Siri နဲ့ AirDrop တွေကတော့ Hardware အဟောင်းတွေမှာသုံးလို့မရတဲ့ အဓိကနှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။)
iPad Mini မှာ Retina Display မပါခဲ့ရင် အရင်နှစ်က ဗားရှင်းထက်ပိုထူပြီးလေးလံမယ်လို့ထင်ပါတယ်။Battery လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုက်ကြီး တဲ့ Retina iPad ကလည်းဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ပါမယ်။ iPad2ရဲ့သွင်ပြင်ကိုဆက်ထိန်းထားမှာပါ။ Chip က Retina Mini နဲ့အလုပ်လုပ်မလားဆိုတာကတော့သေချာမသိပါ။ iPhone 5S မှာလေ့လာရသလောက် A7 ရဲ့ GPU Performance က Fourth-Generation iPad ရဲ့ A6X ထက်ပိုမြင့်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ Apple က အရင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုပဲပြန်အသုံးပြုဖို့များပါတယ်။ အဲဒီအတွက် iPhone က A7 နဲ့ 1GB RAM တွေကို iPad Mini မှာအစားထိုးလို့ရပါတယ်။လက်ရှိ iPad မှာ အရင်ကတည်းကအသုံးပြုနေတဲ့ A5 SoC ကိုသုံးနေတုန်းဖြစ်တဲ့အတွက် A6 or A6X တို့ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တကယ့် Upgrade တွေဖြစ်လာမှာပါ။
iPads တွေကိုဒုတိယပတ်ရဲ့ သောကြာနေ့မှာရောင်းချမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ ဒါကသိပ်တော့မသေချာပါဘူး။ Apple ရဲ့အရင်ကအပြုအမူတွေကအနာဂတ်အတွက်ခန့်မှန်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ နို၀င်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှာရောင်းချမယ်ထင်ရပါတယ်။ iPad အဟောင်းတွေကတော့တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားတော့မှာပါ။
လာမယ့် Event မှာတော့ iPads တွေဟာအဓိကဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က အောက်တိုဘာလ Event မှာ Macs အသစ်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သလိုဒီနှစ်မှာလည်းဒီလိုလုပ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။
OS X 10.9 ကို ဇွန်လက Apple’s Worldwide Developers Conference(WWDC) မှာပြသခဲ့ပါတယ်။ Power User Features တွေပါ၀င်လာပြီး Energy ကိုထိန်းသိမ်းပေးမယ့် နည်းပညာတွေ ပါ၀င်လာပါတယ်။ တစ်ခြားနည်းပညာအသစ်တွေကလည်း Mountain Lion ကိုပိုမိုကောင်းမွန်လာစေမှာပါ။ OS X 10.8 ကိုမောင်းနှင်နိုင်တဲ့ Mac အားလုံးကို 10.9 ကို Upgrade လုပ်လို့ရပါတယ်။
Apple ကလွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်က Mavericks ရဲ့ Golden Master Build ကို Developer တွေကိုပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ အဲဒီအတွက် ထွက်ရှိမယ့်ရက်နဲ့ ဈေးနှုန်းကိုပဲစောင့်မျှော်ရမှာပါ။ အောက်တိုဘာ (၂၂) ရက်နေ့နဲ့ လကုန်အကြားမှာ Mac App Store တွေမှာ Mavericks ကိုရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ OS X Server Add-On ကိုလည်းအတူတူရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Mavericks လိုပဲ WWDC မှာ Mac Pro ကိုပြသခဲ့ဖူးပါတယ်။ System အသစ်မှာတော့ Intel က Ivy Bridge Xeon CPUs(up to 12 cores) ပါ၀င်လာမှာဖြစ်ပြီး 1866MHz DDR3 RAM, PCI Express SSD slots ,Thunderbolt2ports တို့ပါရှိလာပါမယ်။
Apple က WWDC မှာပြောခဲ့တာကတော့ Mac Pro ရဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ ရောင်းမယ့်နေ့တွေကို ဆောင်းတွင်းမှာ ပြောမယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ အဲဒီအတွက် Upgrade လုပ်ဖို့စောင့်နေကြတဲ့ သူတွေအတွက်ကတော့ အချိန်နီးလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့် အင်္ဂါနေ့မှာတော့ ရောင်းချမယ့်ရက်ကိုသိရမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က iMacs တွေအတိုင်းပဲ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာသည့်တိုင်အောင် ရောင်းချမှာမဟုတ်ပါဘူး။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ Retina MacBook Pro ဖြစ်ပါတယ်။ Apple က ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ၁၅ လက်မ နဲ့ ၁၃ လက်မ Models တွေကိုသီးခြားမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်မှာတော့နှစ်မျိုးလုံးကိုတစ်ပြိုင်နက် မိတ်ဆက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။လက်ရှိထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Model တွေနဲ့ အခြေခံအချက်အလက်တွေ၊ ဒီဇိုင်းတွေတူညီမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Intel ရဲ့ Haswell CPU’s,802.11ac,PCI Express SSDs နဲ့ Battery သက်တမ်းပိုကောင်းမွန်လာပါမယ်။ MacBook Pro အသစ်တွေမှာ Thunderbolt2ports ပါ၀င်လာပါမယ်။
GPU အသစ်တွေပါ၀င်လာမှာဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့် ၁၅ လက်မ Model မှာဖြစ်ပါတယ်။ Apple က ၂၀၁၂ Model မှာ AMD or Nvidia က GPU တွေအသုံးပြုခြင်းဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေမှာပါ ။ဒါမှမဟုတ် Intel ရဲ့ Iris 5200 GPUs တွေကိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ 2013 iMac မှာတွေ့ကြတဲ့အတိုင်း Iris GPU က စွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ နောက်ပြီး Motherboard အရွယ်အစားကလည်းသေးငယ်အောင်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ၁၃ လက်မ ကို MacBook Air မှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ HD 5000 ထက်ပိုမြန်မယ့် Iris 5100 GPU အသုံးပြုဖို့များပါတယ်။ဒါပေမယ့် eDRAM 128MB ပါရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။
၁၃ လက်မ အမျိုးအစားက Dual-Core CPUs အသုံးပြုမှာဖြစ်ပြီး ၁၅ လက်မ အမျိုးအစားကတော့ Quad-Core CPUs အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ Intel ရဲ့ ARK Products Page မှာ အနာဂတ် MacBook Pros တွေအတွက် CPU တွေကို စာရင်းပြုလုပ်ထားပါတယ်။
Non Retina MacBook Pro အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုရှိပါတယ်။ Apple ကသူတို့ကို ဆန်းသစ်မလား။(ဒါမှမဟုတ် Ivy Bridge ကိုပဲဆက်သုံးမလား။)Entry-Level Model အနေနဲ့ Retina Macs တွေနဲ့ အတူရောင်းချမလား။ ဒါမှမဟုတ် Retina Computer တွေရဲ့ ဈေးနှုန်းကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ Optical Drive တွေနဲ့ လှည့်ပြောင်းလို့ရတဲ့ Hard Disk တွေက Non Retina Laptops တွေကိုခောတ်နောက်ကျစေပါတယ်။ အဲဒီအတွက် Apple လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့နည်းနှစ်နည်းရှိပါတယ်။
Apple ရဲ့ တစ်ခြား Products တွေကတော့ Update တွေဖြစ်လာမှာပါ။ iPods တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစက်တင်ဘာလ တုန်းကအသစ်အဆန်းမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ Apple ရဲ့ သူ့ Media Player ကိုတစ်နှစ်တစ်ခါဆန်းသစ်တဲ့မူအတိုင်း အခုပွဲမှာဆန်းသစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Apple က သူ့ရဲ့ TV တွေကို မတ်လတုန်းကပြုပြင်ဆန်းသစ်ခဲ့ပြီးအခုပွဲမှာလည်းထပ်မံဆန်းသစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Developer APi ကိုထုတ်ပေးမှာမဟုတ်သလို ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိမှာမဟုတ်ပေမယ့် Apple TV ကပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့အဆင့်မှာရှိပါတယ်။
Apple ရဲ့နှစ်ကုန်နောက်ဆုံးပွဲဖြစ်တာကြောင့် အသစ်အဆန်းတွေကိုလည်းတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့တွေကလည်း iWatchs , Appl TV တွေကိုအလွန်ဆန်းသစ်လာမယ်လို့ထင်နေကြပါတယ်။
သင်ဟာ အသစ်အဆန်းတွေကို တွေ့မြင်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုရင်တော့စဉ်းစားစရာနှစ်ခုရှိပါတယ်။ Apple က သူ့ရဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကသတင်းပေါက်ကြားမှုတွေကိုထိန်းချုပ်နိင်တဲ့စွမ်းရည်မရှိပါဘူး။ အဲဒီအတွက် အသစ်တွေထွက်လာမယ်ဆိုရင်လည်း သတင်းပေါက်ကြားမှုတွေကနေ ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာတွေပဲ ထွက်ရှိလာမှာပါ။ ဒါကဘာကိုပြောသလဲဆိုရင် ဇွန်လတုန်းက Mac Pro ကိုကြေညာခဲ့တာကိုပြန်စဉ်းစားရရင် Apple က အဲဒီ ကွန်ပြူတာကို တည်ဆောက်နေတယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမြောက်အများတော့မထုတ်လုပ်သေးပါဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ Apple ကလျှို့၀ှက်ထားနိုင်ပါတယ်။ Apple က ပွဲမှာ အသစ်အဆန်းကိုထုတ်ဖော်ပြသမယ်ဆိုရင်တောင် ချက်ချင်းရောင်းချမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Apple ကဘယ်လိုကြေညာထားသည်ဖြစ်စေ အင်္ဂါနေ့ မနက် ၁၀ နာရီ မှာတော့ Apple ရဲ့ Event မှာအဖြေကိုအားလုံးသိရှိနိုင်ပါပြီ။
Newer အရှေ့တောင်အာရှ စာပေဖန်တီးမှုဆု မောင်စိန်၀င်း (ပုတီးကုန်း) ရရှိ
Older အောင်မြင်မှုအရှိဆုံး CEO တွေမွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ်များ။